अवैध रुपमा खोलाबाट ढुंगा निकाल्दै गरेका ९ सवारी सहित ९ चालक पक्राउ
बुटवल, १६ चैत । रुपन्देहीको देवदहमा अवैध रुपमा खोलाबाट ढुंगा निकाल्दै गरेका ९ सवारी सहित ९ चालक पक्राउ परेका छन् । देवदह नगरपालिका १० चरंगे खोलामा शनिबार बिहान ढुंगा निकाल्दै गरेका सवारी र तिनका चालकलाई...
प्रदेश सूचना केन्द्रः धमाधम उजुरीको पछ्यौट हुँदै
बुटवल, १७ चैत । प्रदेश नंं ५ सरकारले स्थानिय जनताको गुनासो सुन्ने भन्दै स्थापना गरेको प्रदेश सूचना केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सुचना केन्द्रमा सर्वसाधारणको गुनासो, घरायसी लेनदेनदेखि सरकारी कार्यालयका ढिलासुस्ती, अनियमितता, विकास निर्माणको...
शिक्षकहरुको सयुंक्त मिहिनेतले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुन सक्छ : मन्त्री बराल
बुटवल, १६ चैत । प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री शुदर्शन बरालले शिक्षकहरुको सयुंक्त मिहिनेतले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुन सक्ने बताएका छन् । उनले शिक्षकहरु सवैको एक मेहनतले मात्र शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि गर्न...
प्रदेश नं. ५ः ५ बर्षमा २६ सय किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य
बुटवल, १७ चैत । प्रदेश नम्बर ५को प्रदेश सरकारले पाँच बर्षमा सडकको अवस्था सुधार गरी दोब्बर किलोमिटर सडक पु¥याउने योजना अगाडी सारेको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेश ५ का १२...
हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग
रुपन्देही, १४ चैत : बुटवलमा बुधबार भएको फिरोज खानको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही र शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै व्यवसायीले बिहीबार इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बुटवलको मैनाबगरमा गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका खानको हत्यामा...
बुटवलमा गोली चल्यो, एक भारतिय नागरिक फिरोज खानको मृत्यु
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ गढिटोलमा गोली चलेको छ । अज्ञात समुहको गोली लागेर भारतिय नागरिक फिरोज खानको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । खानको छातीमा गोली लागेको बताइएको छ । उनको शव लुम्बिनी...
विप्लव समूहले १६ गते गर्ने भनेको नेपाल बन्द फिर्ता
१३ चैत, । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित विप्लव समूहले आह्वान गरेको चैत १६ गतेको बन्द फिर्ता लिएको छ । प्रवेशिका परीक्षालाई असर गर्ने कारण देखाउँदै समूहले बन्द फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो । एसईई परीक्षा र...
नजिकै रहेका सरकारी संरचनाहरु हटाएर जितगढी सम्पदालाई व्यवस्थित गरिँदै
बुटवल, चैत १३ । राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा बुटवलको शान, मान र पहिचानका रुपमा रहेको जितगढी सम्पदाको संरक्षणका लागि विशेष अभियान सुरु भएको छ । तत्कालिन अंग्रेज साम्राज्यलाई परास्त गरेको यो मुलुककै ऐतिहासिक सम्पदालाई यस...